Global Voices teny Malagasy » Nanintona ny mpankafy TIC avy any amin’ny faritra ny Barcamp tao Phnom Penh · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Oktobra 2009 20:23 GMT 1	 · Mpanoratra Preetam Rai Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Kambodza, Fanabeazana, Hevitra, Tanora, Teknolojia
Nanomanana Barcamp  fanao isan-taona tao amin'ny Anjerimanontolon'i Paññasastra ao Kambôdja tamin'ny fiandohan'ity volana ity.
Sajal  avy any Thailand miresaka ny fanatsarana atao amin'ny vohikala vaovao mba ho mora hita kokoa ao amin'ny Google.
Thomas , mpamaham-bolongana sy mpandray feo avy any Alemaina, miresaka momba ny MindMapping [manao endrika an-tsarintany ny eritreritra?]. Tsy mianona amin'ny resaka teknolojia ihany ny fandaharam-potoana. Eo ihany koa ireo miresaka ny fanolorantena, serasera sosialy, fanabeazana ary ny lalao.
Ny mpanatrika Thai-Japoney 31o5  miresaka momba ny tetika [systeme] iray ahafahan'ny tsirairay mampiditra ny nofinofiny sy manadihady azy ireny [na mametraka ny nofiny sy mandinika izay lazainy].
Ny mpandray anjara Vietnamiana Hung  miresaka ny momba ny serasera sosialy any Vietnam
Manana olam-pifandraisana noho ny fiadiana ny ho tompon'ny tempoly iray  i Thailand sy i Kambodja. Nahafinaritra ery ny nahita ny tanoran'ny roa tonta miara-mipetraka sy miady hevitra ary mifampianatra.
Miresaka momba ny camp teknolojika sy fampahalalam-baovao [mety hataony] any amin'ny faritra antsoina hoe Camp TIC Mekong  ny mpanatrika Thailandey ary maka hevitraamin'izay atrehiny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/10/13/3850/
 fiadiana ny ho tompon'ny tempoly iray: https://globalvoicesonline.org/2009/07/20/cambodia-thailand-preah-vihear-dispute-continues/
 Camp TIC Mekong: http://www.facebook.com/pages/Mekong-ICT-Camp/151377056891
 Tharum Bun's account of Barcamp Phnom Penh 2009: https://globalvoicesonline.org/2009/10/07/cambodia-barcamp-phnom-penh-2009/
 Preetam Rai: https://globalvoicesonline.org/author/preetam/